Vanorwira Kodzero Vanoti Vanhu Voshungurudzwa Sarudzo Dzisati Dzatanga
Gumiguru 08, 2007
Masangano anorwira kodzero dzevanhu, abuditsa magwaro anoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika.
Gwaro reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoratidza kuti vanhu vanopikisa hurumende, kana vanorwira kodzero dzevanhu, vari kushungurudzwa, uye vamwe vanonzi vari kurwadziswa pamwe nekutyisidzirwa nevechidiki veZANU-PF, kana vasori.
Gwaro iri rinoti kodzero dzevanhu vanosvika mazana mashanu nemakumi mana nevanomwe, dzakatyorwa nenzira dzakasiyana siyana, muna Nyamavhuvhu zvichienzaniswa nevanhu vanodarika chiuru nemazana maviri, vakasungwa, kurohwa, kushungurudzwa kana kuuraiwa muna Chikunguru.
Ukuwo Zimbabwe Peace Project, yabuditsawo gwaro rayo remuna Nyamavhuvhu. Gwaro iri rinoti kune vanhu vari kudzingwa mudzimba dzavanogara nevaridzi vemba, kana vachitsigira bato rinopikisa hurumende.
Gwaro iri rinoratidza zvakare kuti vanhu vari kurohwa vakaonekwa vakapfeka ma T-shirts kana zvimwe zvipfeko zve MDC.
Ku Goromonzi, zvinonzi pa St Francis Secondary School, kanzura ve ZANU-PF vanonzi vakashungurudza nekutyisidzira vagari vemunharaunda iyi, kuti vabhadhare mari dzekupemberera Heroes Day. Kanzura ava pavakaona kuti vanhu havasi kuda kubhadhara mari iyi, vanonzi vakaudza vanhu ava, kuti vachaona zvichaitika kwavari panguva yesarudzo, izvo zvakaita kuti vamwe vabhadhare mari idzi nekutya.
Mutori wenhau we Studio 7, Carole Gombakomba aita hurukuro naMuzvare Jestina Mukoko, national director ve ZPP, avo vanoti zvakanyanya kukosha mugwaro ravo, inyaya yekutyisidzirwa kuri kuitwa vanhu, kunyimwa rubatsiro rwechikafu, pamwe nekukuvadzwa nekuuraiwa kwevanopikisa hurumende.